Xog Waran Shirqoolkii Dr. Xuseen Cali Cilmi , Tifaftiraha Wargayska Assiyaasa
Ilo Wargal oo jooga Nairobi Kenya.
Taarikhdu Markii ay ahayd 02.10.2002 ayaa xilliga saqdii dhexe oo ay saacaddu ahayd (3:45)Daqiiqo, waxa gurigisa lagala baxay Mudane, Dr Xuseen Cali Cilmi,oo kuyaal Xaafadda EastLeigh, Six Street, dhibbane Dr Xusen Cali Cilmi Waxa gurigiisa soo weeraray tiro rag ah oo katirsan ciidanka Boliska Kenya, kuwa loo yaqan Flying Scout, Ciidankan oo watay Gaari PEUGOT ah, tiradooduna ay dhamayd Siddeed(8) Nin oo ku hubaysan Hubka fudud iyo Qoryaha Loyaqaan AK47, ayaa xilliga kor ku xusan soo garaacay Albaabka Guriga Dhibbanaha.
Garaacid kadib Dr. Xuseen Cali Cilmi waxa uu furay albaabkii, waxa markiiba lagu bilaabay Dharbaaxo iyo jirdil iswata, si looga dhumiyo dareenka, markiiba dadkii xafadda ayaa buuqay, hasayeshee Ciidankan oo ku labisnaa dharka cad, waxay ku guulaysteen inay latagaan DR. Xusen Cali Cilmi, Aqoonsiga lagu gartay Waxa falkan gaystay inay yihin Ciidan Kenya katirsan ayaa waxa muujiyay Raadiyeyasha yar yarka ah ee 150 Km wax looga maqlo, oo markaas midkastaa oo kamid ragga howlgalka fulinayay gacantiisa ku jiray.
Waagu markuu baryay ayaa marwada u hoyata Dr Xuseen Cali Cilmi waxay laxariirtay Caa'ilada Xusen, iyadoo markiiba dadkii howsha Dr Xusen ay Gaartay ay laxariireen xarumaha Boliska kenya, gaar ahan xarunta laga maamulo Boliska xaafadda East Leigh(Islii) ee Bangani Police Station.
Si kastaba ha'ahaatee waxa lagu guulaysan waayay in lasoo ogaado Halka, Goobta Iyo Xabsiga lala beegsaday Dr Xuseen Cali Cilmi, taasi waxa kasii darnaa markii ay dadka intiisa badan laxariireen Laanta socdaalka Kenya, iyagoo ka dalbaday in dhamman Diyaaradaha kaduula kenya oo u kicitima somaliya oo dhan labaaro si looga taxadaro In Dhibbanaha looduuliyo Somaliya, Arrintaan laxariirta u kuurgalidda diyaaradaha waxa keenay in kal hore la'isku dayay in Dr Xuseen loo af dhuubto Soomaaliya arrimo laxariira Siyaasadda awgeed.
Saacaddu markii ay ahayd 12:35 daqiiqo Xilliga ay sacaddu is badasho kenya ayaa waxa lasoo ogaaday in Dr Xuseen lagu hayo Xarunta CID'da Kenya ee Police Head Quarters loona yaqan (KASARANI), saldhiggan KASARANI waxa uu kuyaal Banaanka magaalada Nairobi, magaaladana waxa uu u jiraa illaa 15Km dhinaca Bari, xabsigan waxa lagu xiraa dadka danbiyada waawayn gala sida Gangs-ka, Hogamiyeshasha Xisbiyada, Askarta danbiyada Lagu qabto, IWM.
Si kastaba ha'ahaate, Ogaanshaha Dhibbanaha waxay naruuro u noqotay Caa'iladiisii , Marwadiisii, Iyo Caruurtisii oo aad ugu farxay inay maqlaan Nolosha Aabahood, Dr Xuseen Cali Cilmi.
Maalinkii Khamiista oo ay tarikhdu ahayd ahayd 03.10.2002 ayaan waxaan soo booqday saldhigga Kasarani, aniga oo doonaya xogta dhibbanaha Dr Xusen Cali Cilmi, waxa dad goobjoogayaal ahi ay iishegeen in Dr Xusen Cali Cilmi ay Sarakiil Maraykan ah ugu yimaaden Xabsiga ama kaxaysteen, qoladan maraykanka ah waxa ay kawada hadleen Dhibbanaha lama oga illaa iyo hadda.
Laba Saac ka dib ayaa qolkii xabsiga lagusoo ceshay Dr Xusen Cali Cilmi, waxa markiiba Dr'ka loo qabtay Qareen u dooda Xuquuqdiisa, Ehelada iyo Marwada u hoyata Dhibbanaha waxa loo sheegay in arrintu ay u taal beesha uu ka dhashay dhibbanaha wax garadkooda ee Nairobi.
.... iyo .... oo labadaba ka mid ah Ganacsatada sida aad ka'ah looga yaqaan dalka kenya , isla markaana xiriir fiican laleh Dowladda kenya ayaa ah kuwa qabtay qareenka u doodaya sida loogu tacadiyay xuquqda Dr Xusen Cali Cilmi.
DR Xusen waxa uu ku jiraa illaa iyo hadda Xabsiga Kasarani Police Station, maalinka isniinta ah ayaa waxa larajaynayaa in lasoo taago maxkamad Afar (4) kamid ah Polis-ka Kenya ee falkaan gaystay, waxa soo baxaya warar kale oo sheegaya in kooxo soomaali ahi ay shirqoolkaan wax ka'ogayeen kooxahan oo qaarkood lamagacaabay.
NB: Ugu danbayntii Qoralkan midka xiga ayaan kusoo bandhigaya Cidda ka danbaysay Shirqolkaan iyo wararka kasoo baxaya Polis-ka Kenya Iyo warbixin uu isiiyay Dr Xusen Cali Cilmi oo aan kula kulmay Xabsiga in ku siman Lix (6)daqiiqo, Iyo Waliba Howsha Maxkamadda meesha ay marayso , qarashka Ku baxaya inta uu la'eg yahay, iyo Jawiga xaaladda isu badashayba.
KULAABO BOGGA WARARKA OCT 5, 2002
AFEEF: Aragtida qoraalkaan waxaa leh wargalka nasoo gaarsiiyey, kana tarjumi maayo aragtida SomaliTalk.
XUSUUS: Saxaafada ayey kamidtahay in la qariyo magaca qoraaga ayadoo la fiirinayo dhincayo badan.
XUSUUS: Meelaha bannaan ama masaxan waxaa loo yeelay arimo la xiriira xuquuqda dadka, degaanka ama hay'daha ku qoraa oo la dhawray.
�� Virs cusub... BUGBEAR
�� Virus cusub .... OPASOFT
�� Viruska Halista ah ee Goldfish.
�� Taxadarka Emailada Nayjeeriya
�� Xusuusin carruurta iyo Internetka